Global Voices teny Malagasy · Febroary 2018
Pejy 2 amin_ny 15
Tantara tamin'ny Febroary, 2018
Azia Atsimo28 Febroary 2018
"Tsapantsika fa raha toa ka miteraka hetsika miiba ny vaovao sy tantara miiba, nahoana ary no tsy mamoaka sy manolotra tantara tsara izay afaka mitondra fiantraikany tsara kokoa."
Azerbaijan28 Febroary 2018
Tatitry ny Mpisera: Anaty Antontan-taratasy Niporitsaka, Tenenin'ny Kaomisiona Eoropeana Mba Hifehy Ny Tenany Tsy Hanao Kabary Mandratra Ireo Orinasa Momba Ny Teknolojia
Eoropa Andrefana28 Febroary 2018
Ny tatitry ny mpisera Advox dia manolotra topimaso iraisam-pirenena momba ireo fanamby, fandresena, ary ireo fironana mipongatra momba ny zo amin'ny aterineto manerana izao tontolo izao.
Tohizantsika ilay fifankahafantarana amin'ireo mpandika teny vehivavy na lehilahy ato amin'ny Global Voices amin'ny teny Frantsay. Ny sampan'asa misy an'i Yann Leymarie dia ny fiarovana ny ranomasimbe.
Hetsi-panoherana Faobe Tao Iràna, Fanadihadiana Ny Amin'ny Fototra Nipoirany
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana27 Febroary 2018
Inona moa izany no mahasamihafa azy io amin'ny hetsi-panoherana tamin'ny taona 2009, ary nahoana no mieritreritra ny olona sasany fa manan-danja kokoa noho izay nieritreretana azy ny ady atrehana amin'ity.
Mediam-bahoaka27 Febroary 2018
India: Eo Anelanelan'i Tibet Sy Shina
Azia Atsimo27 Febroary 2018
Nandritra ny andro vitsivitsy lasa izay, nifantoka tamin'ny fandaminana ny fitroaran'i Tibet sy ny Governemanta Shinoa ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena, saingy ao India, nahitana adihevitra maromaro mikasika ireo hetsik'i Shina ao Tibet sy ny andraikitr'i Tibet ao anatin'ireo fifandraisana misy eo amin'i India sy Shina....Tsy azoko mihitsy ny mbola tokony hanaovantsika...